Iza no tompoinay - Serivisy ara-dalàna an'ny fanjakana Prairie
iza no tompoinay
Ankoatry ny fanompoana ny indostrialy ambany sy ny fianakaviana rehetra, ny fanjakana PRAIRIE dia manompo ny filàna tsy manam-paharoa amin'ny fiaraha-monina MAFY, anisan'izany:
- Veterans, mpikambana ao amin'ny serivisy, mpamandrika sy ny vady aman-janany.
Tsindrio eto raha te hahalala bebe kokoa momba ny Tambajotra fanampiana ara-dalàna an'ny tafika Illinois.
- olon-dehibe (60+)
Tsindrio eto raha hianatra bebe kokoa momba ny fanampiana ara-dalàna ho an'ny olon-dehibe antitra amin'ny teny anglisy na espaniola.
- Ireo olona voan'ny SIDA / SIDA
Tsindrio eto raha hianatra bebe kokoa momba ny Tetikasa VIH / SIDA aminay amin'ny teny Anglisy na Espaniôla.
* Ireo fepetra ambony momba ny fidiram-bola sy / na fidirana ambony dia mety mihatra amin'ireo mponina ireo.